Iinoveli ezilungileyo kakhulu
Uphengululo lwenoveli yolonwabo
Indawo, nguLuis Montero Manglano
Ngubani othe uhlobo lwe-adventure lufile? Yayingumcimbi nje wombhali ofana noLuis Montero esondela kuyo ngokuchukumisa kwakhe okuthile ukuze sonke siphinde sicinge ukuba kuncinci okuseleyo esikufumanayo kweli hlabathi kunye nokuba sijonge ntoni. Kuhlala kukho…
ILa Costa de las Piedras, inoveli yohambo lwaseMallorca
Inoveli ye-adventure esiza kuthi phantsi kwegama elingu-Alejandro Bosch, mhlawumbi ukuze iphele igqibezela le ndawo yemfihlakalo ekhukulisa iyelenqe. Kuba ibali lithatha indawo yalo yamagnetic kulo naluphi na uhambo olusekwe kwimbali eyintsomi. Inikelwe umsitho ngemibala etyebileyo ene...
Iincwadi ezi-3 ezigqwesileyo ze-adventure
Imvelaphi yoncwadi isekelwe kuhlobo lwe-adventure. Ezo namhlanje zigqalwa njengezona ncwadi zibalaseleyo zoncwadi lwendalo iphela zisithatha sithabathe uhambo oluya kwiwaka leengozi nakwizinto ezingacingelwanga. Ukusuka e-Ulysses ukuya eDante okanye eDon Quixote. Kwaye namhlanje uhlobo lwe-adventure ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaClive Cussler
Ukuba kukho umbhali we-adventure okhoyo osabambe uhlobo lokuzonwabisa ngaphakathi kwabathengisi, nguClive Cussler. NjengoJules Verne wale mihla, lo mbhali usikhokelele kwiindawo ezinomdla ngokuzonwabisa kunye nemfihlakalo njengamathambo omqolo. Inyani …
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zika-Alberto Vázquez Figueroa
Kum, u-Alberto Vázquez-Figueroa wayengomnye wababhali bexeshana, ngengqiqo yokuba ndamfunda ngokuzimisela njengombhali obalaseleyo wezinto ezizihambelayo ezikhawulezayo, ndisemncinci kakhulu. Kutshanje ndibuyele kuye enkosi kwincwadi yakhe yamva nje ethi Goodbye Mister Trump, apho ndiye ndaqinisekisa ukuba ...
Intlekele enkulu etyheli, nguJJ Benítez
Bambalwa ababhali emhlabeni abenza umsebenzi wokubhala indawo yomlingo njengoJJ Benítez. Indawo ehlala umbhali kunye nabafundi apho inyani kunye neentsomi zabelana ngamagumbi afikelelekayo ngezitshixo zencwadi nganye entsha. Phakathi komlingo kunye nentengiso, phakathi kokuphazamisa kunye ...
Ulwimi olufihliweyo lweencwadi, ngu-Alfonso del Río
Ndikhumbula uRuiz Zafón. Kuyenzeka kum ngalo lonke ixesha ndifumana inoveli eyalatha kwimiba yeesoteric yeencwadi, kwiilwimi ezifihliweyo, kwelavumba lobulumko lihlanganiswe kwiishelufa ezingapheliyo, mhlawumbi kumangcwaba amatsha eencwadi ... Kwaye kulungile ukuba kunjalo . Ingcinga enkulu yombhali waseCatalan ...
IMengele Zoo nguGert Nygardshaug
Kusoloko ilixesha elilungileyo lokufunda ukwazi nge-idiomatic ezifana ne "Mengele Zoo", ibinzana elenziwe ngesiPhuthukezi saseBrazil esalatha kwisiphithiphithi sayo nayiphi na into, enezinto ezimbi ezenziwa ngugqirha ophambeneyo ogqiba iintsuku zakhe zomhlala-phantsi kanye kanye eBrazil. Phakathi kokuhlekisa okumnyama kunye nokucinga okungafunekiyo kwe ...
UVozdevieja, ngu-Elisa Victoria
Ngubani ongamkhumbuliyo u-Elvira Lindo's Manolito Gafotas? Ayisiyo into yokuba ngumcimbi wokuba kwifashoni malunga nabaphikisi babantwana kwiinoveli zabo bonke abaphulaphuli. Ngumbuzo wokuba bobabini ngexesha lakhe u-Elvira kunye no-Elisa ngoku, kufutshane ...
Kude kude, nguHernán Díaz
Kuhlala kulungile ukudibana nababhali abanesibindi, abakwaziyo ukuthatha umsebenzi wokubalisa amabali ahlukeneyo, kude nangaphaya kweelebhile ezibiwe ezinje ngokuba "ziyaphazamisa" okanye "ziyila." UHernán Díaz uveza le noveli ngokutsha okungenakuphikwa komntu obhala into ngenxa yakhe, ngenjongo yokreqa kwimo kunye nefom, ukuhlengahlengisa ngomlingo ...
UOliver Twist, nguCharles Dickens
UCharles Dickens ungomnye wababhali beencwadi baseNgilani abaphambili ngalo lonke ixesha. Kwakukho ngexesha lama-Victori (1837 - 1901), ixesha apho uDickens ahlala khona kwaye wabhala, ukuba inveli yaba yinto ebalulekileyo yokubhala. UDickens wayengutitshala ongenasiphelo wokugxekwa kwezentlalo, kwi ...